၄ နှစ် ၄ မိုးစောင့်ပြီးနောက် ကြည့်ရှုနိုင်တော့မယ့် Gong Jun ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းသစ်
ချိုင်းနားရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးလောက,က တကယ်ကို ထူးဆန်းလှပါတယ်။ ရိုက်ကူးပြီးသားဇာတ်လမ်းတွေဆိုရင်လည်း ချက်ချင်းပြသခွင့်မရပဲ လိုင်စင်စောင့်နေရာက နှစ်တွေအကြာကြီးအထိ စောင့်နေရတတ်ပြန်ပါတယ်။ အခုလည်း ၂၀၁၇ ကတည်းက ရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့တဲ့ Gong Jun ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ပြသခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။
“Art On” ခေါ် “Shining Like You” ဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့ Gong Jun နဲ့အတူ မင်းသမီး Wang Zixuan က ပါဝင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ အချစ်ဇာတ်လမ်းပီပီ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ထားပုံကလည်း ချစ်စရာလေးပါပဲ။ Li Qi Yi (Wang Zixuan) ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတာကြောင့် အရာရာကို ကျော်လွှားပြီး ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ ရွေးချယ်တဲ့လမ်းခရီးတိုင်းက အဆင်ပြေချောမွေ့တယ်ဆိုတာ ရှားတာဖြစ်လို့ သူမအတွက် အခက်အခဲတွေကလည်း ရှိလာပြန်ပါတယ်။
ရေစက်တွေပါလာတော့ Fang Yan (Gong Jun) နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် သူမဘဝကြီး ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ? ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်မြောက်မလား? သာမန်မိန်းကလေးပုံစံကနေ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်အောင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုကူညီသွားမလဲဆိုတာကို လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအတိုင်း Ro ဆန်ဆန်လေး ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ၂၀၁၇ ကတည်းက ရိုက်ကူးထားတာဆိုတော့ ၄ နှစ်လောက်ကြာနေပါပြီ။ Gong Jun ရဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရကျိုးနပ်မှာပါ။ အောက်တိုဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ကစတင်ပြီး Tencent မှာ စတင်ပြသတော့မှာဖြစ်လို့ Ro မှကြိုက်တဲ့သူလေးတွေ လက်လွတ်မခံဘဲ ကြည့်နိုင်ပါတော့မယ်။
Next BLACKPINK ကို ကြိုက်လွန်းလို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကို ​ပြောပြခဲ့တဲ့ Girls' Generation အဖွဲ့ဝင် Sooyoung »
Previous « Hanfu ဝတ်စုံတွေကို ပိုမိုခေတ်ထစေခဲ့တဲ့ မင်းသားချောတွေအဖြစ် နာမည်တွင်နေသူ (၇) ဦး
တရားစွဲဆိုမှုမှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ငွေကြေးအမြောက်အမြားပါ လျော်ကြေးအဖြစ်ရရှိခဲ့တဲ့ Zhao Liying